UJoshuwa King Childhood Indaba Plus Untold Biography Amaqiniso
Ikhaya STARS E-EUROPE UJoshuwa King Childhood Indaba Plus Untold Biography Amaqiniso
Isikweletu ku-AFCB no-Sitting Bull 1845
I-LB inikeza iNdaba Egcwele Ye-Football Genius eyaziwa ngesidlaliso "Josh". Indaba yethu ye-Joshua King Childhood kanye ne-Untold Biography Facts ikulethela i-akhawunti ephelele yemicimbi ephawulekayo kusukela ngesikhathi sokubantwana kuze kube yimanje. Ukuhlaziywa kuhilela ukuphila kwakhe kwasekuqaleni, imvelaphi yomndeni, indaba yokuphila ngaphambi kokudumo, ukuphakama kwendabuko, ubuhlobo nokuphila komuntu siqu njll.
Yebo, wonke umuntu uyazi ukuthi ungumdlali we-talent onethalente onethalente eluhlaza futhi iso lokufaka umgomo. Kodwa-ke, bambalwa kuphela abacabangela i-Biography kaJoshua King okuyinto ejabulisa kakhulu. Manje ngaphandle kokuqhubeka kwe-ado, ake siqale.
UJoshuwa King Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts- Isiqalo sokuphila
UJoshua Christian Kojo King wazalwa ngosuku lwe-15th lukaJanuwari 1992 kumzali waseGambi nomama waseNorway e-Oslo, iNhloko-dolobha yaseNorway. Wazalwa umhlanga ohlangene ngezwi elimnyama eliveza isakhi esiyinhloko sikayise ogama lakhe linguChuku King.
Ngokuvumelana ne Telegraph, UChuku njengabanye abaningi abafudukayo bafika e-Oslo, eNorway esuka eGambia ngemuva kokukhuthazwa ngumalume wakhe owayesehamba phambili wathola umsebenzi eSweden. Wagcina iminyaka emibili ukuze akhokhe imali ukuze aqale uhambo oluya eNyakatho Yurophu.
Lapho efika eNorway, uChuku wabona amathuba okusebenza njengoba ekuqaleni ayeqinisekiswe yisihlobo sakhe. Waqeda ukuthola imisebenzi emibili ekhokha kahle. Usebenze njengomsebenzi wokulungisa umkhandlu umsebenzi wesikhashana ngenkathi egijima e-reggae impresario ebusuku. Umsebenzi wamuva waba noChuku odumile ngoba wayenomthwalo wokuletha ukuthandwa kukaDamian Marley e-Oslo. Ukuzibona Ukuphila kahle e-Oslo kwaholela esinqumweni sokungabuyeli eGambia nokwenza umndeni.
Ngesikhathi eseNorway, uChuku wahlangana nomkakhe (umama kaJoshua King) futhi inyunyana yabo yaholela ekuzalweni kukaJosh. UJohn King wakhulela emkhakheni owodwa onzima kakhulu wezizwe eziningi e-Oslo. Wayeyisifo se-asthma kusukela esemncane. Ukuzimisela ukuba abe ngumbono wambona elwa nokulwa nesifo se-asthma.
UJoshuwa King Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts- Ukuphila Okuqala Kwomsebenzi
Ngenkathi ezinye izingane zithatha eS Skiing okuyinto imidlalo enkulu eNorway, iNkosi encane yayiphakathi kwezinye izingane ezimbalwa ezithatha ukudlala ibhola lebhola. Uthando lukaKhongolose lo mdlalo lwambona ngesikhathi eneminyaka engu-6 ebhalisa ohlwini lweqembu lakhe lendawo edolobheni laseRomsas elimnike isiteji ukukhombisa ithalenta lakhe.
U-Romsas ogama lakhe lokuqala lokusha kwentsha naye wayeyindawo yomndeni kaJoshua emzini wase-Oslo, eNorway. Ngesikhathi eseRomas, uJosh omncane wakhuphuka masinyane njengoba ephumelela ngokumelene nabaphikisi bezinye izinhlelo zokusha.
Ku-2006, eneminyaka engu-8, wajoyina u-Valerenga, iqembu leNorway elaziwa kahle ngegama lokuthuthukisa nokwenza abadlali abasha babe yizikole ezinkulu eYurophu. Yonke iphupho lomntwana ukujoyina isikole esikhulu nakakhulu emsebenzini wabo osemusha. Ukuphila eValerenga kwakungamnandi njengoba uJoshuwa kwakudingeka enze imihlatshelo eminingi. Kwakukhona izikhathi ubaba wakhe uChuku ekhumbula ukulahlekelwa umsebenzi wakhe ukuze eze emidlalweni yakhe engenakubalwa. Wenza lokhu ngisho noma kusho ukulala emotweni yakhe ngenkathi emyisa emidlalweni ende.
UJoshuwa King Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts- Umgwaqo oDumela
UJoshua King phakathi nezinsuku zakhe noValerenga babenelungelo lokuhlangana ne-United Legend yangaphambili Ole Gunnar Solskjaer owadlala ingxenye ebalulekile ekuthumeni kwakhe e-United's academy. Osemncane ngenkathi edlala neqembu lakhe lentsha naye wazithenga ngokuzibandakanya Ole Solskjaer's isikole sehlobo lebhola e-2007. Ngesikhathi eseValerenga, iNkosi nge Ole Solskjaer's ukuxhuma kwakunenhlanhla ukuqeqesha ne-Manchester United esikoleni ngezikhathi eziningi.
Ukuhamba kweNkosi, amandla namandla okuqeda imvelo wabona Ama-Devils abomvu ama-scouts ambiza ngokuthi ithalenta elisha kunazo zonke eNorway. Kamuva, wamenywa eNgilandi ukuze ahlolwe. Udlule kodwa imithetho ye-UEFA yamvimbela ukuba asayinwe isivumelwano neqembu kuze kube yi-16. Inkosi eneminyaka engu-16 yajoyina intsha ngokusethwa kwayo kwentsha. Lesi sinqumo sifikile ngemuva kokulahla ukunikezwa kwecala kusukela e-Chelsea. Yebo! uvele ufunde lokho.
INkosi iphumelele ngokushesha ngesikhathi seNyuvesi yentsha, umdlalo owawubona enza i-United debut ekuqaleni nje ngonyaka ngemuva kokujoyina isikhungo seqembu.
Izinsuku Zokuqala Ezihlangene ZakwaJoshua King (Isikweletu SittingBull)
Ngenxa yempahla ye-Manchester United yokuzikhethela phambili, iNkosi ayikwazanga ukuphoqa indlela eya ehlangothini eliphezulu. Lokhu kwakungenxa yokuthi kwakungeyona into ebhekene ne-benching elula UWayne Rooney, UCarlos Tevez noDimitar Berbatov, Cristiano Ronaldo, Ryan Giggs no-Nani.
UJoshuwa King Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts- Ukuphakama Ekudumeni
Ngomzamo wokuthola ibhola leqembu lokuqala, iNkosi yachitha isikhathi ngokuboleka imali ukuze iqinisekise. UJoshua King waqhubeka nokubolekisa isikweletu sakhe ngemuva kokuzibona engakakwazi ukudiliza uMongameli wokuqala we-Man United ngisho nalapho engekho UCarlos Tevez futhi Cristiano Ronaldo. Amathuba e-United ayengaba nzima ukufika.
Ngokudabukisayo, eminyakeni emihlanu, iNkosi inenkontileka eManchester United, yenza nje ukubonakala kokuncintisana kokubili ngemali mboleko. Phakathi kwamaqembu e-5 adlala ngesikweletu, isikhathi sakhe Hull City kwaba nenzuzo enkulu kakhulu.
Isinqumo sokushiya i-United:
Ngemva kokuzwa okwanele ngesikhathi esingenzi ukudlala, iNkosi yanquma ukuphoqa ukuthutha ngemuva kokubona isivumelwano sakhe se-United ngokusebenzisa. Lesi sinqumo sifike ngesikhathi uSir U-Alex Ferguson ongakaze amnike ithuba lahlelwa ukuba ashiye umhlalaphansi. Ngaphambi kokuthatha umhlalaphansi, wabikezela uJoshua King ukuba abe nekusasa elihle. Ngamazwi akhe;
"Uyashesha kakhulu ngomzimba omuhle futhi kufanele abe nomsebenzi omuhle."
UJoshua King wanquma ukuthuthela mahhala eBournemouth lapho u-Eddie Howe akhipha khona okuhle kuye. Bonke abanye, njengoba besho, manje umlando.
UJoshuwa King Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts- Ukuphila Ubudlelwano
UJoshua King ungomunye wabadlali bebhola lezinyawo abahlukumezekile ngombono womphakathi ngenxa yokuthi impilo yakhe yothando ayiyidrama. Ngaphandle kweNorway ephumelelayo, kunomfazi omuhle kumuntu kaMagdalena Temre.
Intombi kaJoshua King- Magdalena Temre (Imiklomelo kuya ku-Jolygram ne-Sortitoutsi)
UMagdalena Temre akayona nje umfazi omuhle, kodwa oyedwa ubuhle nobuchopho. Uqeqeshiwe kahle ekukhangiseni nasekuphathweni kwebhrensi. Bobabili abathandi ababengabashadile nabangane abangcono kakhulu bajabulela ubuhlobo babo iminyaka embalwa ngaphambi kokukhetha ku-2015 ukubopha ifindo. Kwakuyimikhosi yemfihlo eyayibandakanya umndeni kaJoshua kuphela nabangane bakhe.
UJoshua King Nomfazi, uMagdalena Temre (Isikweletu I-DailyMail)
Lo mbhangqwana ndawonye unendodana encane emva komshado. Indodana yabo uNowa King yazalwa ngoMashi 1, 2016. Ekwahlulela ngokuthunyelwe kwabo kwezokuxhumana, uJoshuwa noThimre bahlala bejabule kanye noNowa indodana yabo ethandekayo.
Umndeni kaJoshua King
Ukubukeka ngokujulile ebusweni bukaBaba neNdodana kubonisa ukufana okufana nokubonakala kombala wesikhumba ohlangene noNowa ngenxa kababa wakhe.
UJoshuwa iNkosi neNdodana, uNowa (Isikweletu kuJoshuwa King Instagram)
UJoshuwa King Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts- Ukuphila Personal
Ukukwazi impilo kaJoshuwa King kuyokusiza ukuba uthole isithombe esiphelele kuye. Ukwelapha umkakhe uMagdalena Temre njengenduna yenkosikazi kuyisici sakhe sokubheka njengoba kubonwe emgqeni we-tattoo endaweni yakhe yenhliziyo ayisebenzisayo ukukhombisa ukuzibophezela kumkakhe.
Joshua King Tattoo Facts (Isikweletu ku-Joshua King's Instagram)
UJoshua King ungumuntu omele isikhathi, umthwalo wemfanelo futhi angabangela indlela ekwenzeni icebo eliqinile futhi elingokoqobo empilweni yakhe. Unesimo sangaphakathi sokuzimela esenza ukuba enze inqubekelaphambili ebalulekile kokubili impilo yakhe yomuntu siqu.
Njengoba kuphawulwe kusukela ku-akhawunti yakhe ye-Instagram, okuningi kokuzibophezela kwakhe ngokuphila kwakhe kuhloswe ngokuzungeze umkakhe nendodana yakhe. UJoshua King ujabulela ukuxhumana okuhle nomfana wakhe omncane uNowa obonakala sengathi uthanda konke uyise akwenzayo.
UJoshua King- Indoda yemidwebo (Isikweletu kuJoshua King's Instagram)
Uma becabanga ukuthi basondelene nabo, kucatshangwa ukuthi uNowa wayezoqhubeka ephila iphupho likayise ngemuva kokuthatha umhlalaphansi.
UJoshuwa King Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts- Ukuphila Komndeni
UJoshua King uvela emlandweni womndeni othobekile, lowo amalungu akhe abona ukuhlanganyela kweNkosi eNorway football, udumo. Ukuba yizigqila (njengoba kubonwe kuyise kaKhongolose) futhi ukuzinikezela ekufinyeleleni imigomo yomsebenzi bekulokhu kubonakalisa umndeni owuthanda ibhola ngaphezu kweNorwegian isilinganiso.
"Ngesikhathi ngisemncane, kanye ngonyaka, ubaba wayeyongithatha eLondon ukuyothenga amabhola amasha ebhola ngaphambi kokuba aphume eNorway," INkosi yazikhumbula ngesikhathi ekhuluma ngokuzinikela kwakhe kwebhola.
UJoshuwa King Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts- Amaqiniso angaziwa
UJoshua King uhlanganyela emlandweni womndeni ofanayo kanye nomsebenzi wakhe nomunye umuntu waseNorway nowayeyena owayengumdlali we-Aston Villa uJohn Carew.
UJohn King noJohn Carew Okufanayo (Credit to I-Tv2 Norway)
Bobabili bebhola banomzimba ofanayo, ijubane namandla angqondo. Wena abanye abalandeli bakholwa ukuthi uJoshuwa King uyashesha kancane.
Uthi bewazi?… Irekhodi elilimazayo lokulimala Callum Wilson wanikeza iNkosi ithuba lokukhombisa ukuthi uhle kangakanani kulo mdlalo. Ngisho nalapho uWilson ebuya, uBournemouth kwadingeka agcine isakhiwo esasifanele abadlali ababili.
Uthi bewazi?… UJoshuwa King ubephakathi kwabadlali beMan United Federico Macheda futhi UGabriel Obertan owake wakhathaza ukubeka uphawu ku-Premier League. Waphumelela ngesikhathi abanye bephela futhi bewa ebalazweni leNdunankulu.
QAPHELA QAPHELA: Siyabonga ngokufunda iJoshua King Childhood Story kanye ne-Untold Biography Facts. Kuzo LifeBogger, silwela ukunemba nokulingana. Uma uthola into engabonakali kahle, sicela wabelane nathi ngokuphawula ngezansi. Sizohlala sibazisa futhi sihlonipha imibono yakho.
I-Callum Wilson Indaba Yobuntwana Kanye ne-Untold Biography Facts